တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးက ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှု ရှိကြောင်း WHO တာဝန်ရှိသူပြောကြား - Xinhua News Agency
ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အများအပြားအသုံးပြုနေသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား ဘေးကင်းမှု နှင့် ထိရောက်မှု နှစ်ခုလုံးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)၏ ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များ လက်လှမ်းမီရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mariangela Simao ထံမှ သိရသည်။ “ဒါတွေက ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ထိရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ အချက်အလက်သက်သေတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက မေ ၁၀ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mariangela Simao က “Sinopharm ကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ အများအပြား အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဆေး ၆၂ သန်း အသုံးပြုပြီးပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ဒါကို ဘေးကင်းမှုနဲ့ ထိရောက်မှု နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၌ ဝန်ကြီးချုပ် Zoran Zaev က Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု ခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
WHO ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom က ပြီးခဲ့သော အပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး WHO က တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော ပထမဆုံး တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများအား အလုပ်သမားများက သယ်ယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ အတည်ပြုချက်သည် ပြင်ပ နည်းပညာအကြံပေးအုပ်စုက ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mariangela Simao က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့ ဇန်နဝါရီလနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတွေက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Sinopharm အတွက် ရရှိနိုင်တဲ့ လက်တွေ့အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်ကောင်းအတွက် ထိရောက်မှု ၊ ဘေးကင်းမှုတွေနဲ့အတူ ဒါက သင့်လျော်တယ်လို့လဲ ယူဆပါတယ်။”ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက Sinopharm ကာကွယ်ဆေးအား ပြသနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
WHO သည် COVAX Facility ကို ကတိပြုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယင်းသည် “သာတူညီမျှသော လက်လှမ်းမီရေး ယန္တရား ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတွက် ကျွန်မတို့ အများကြီး အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် ဆေးတွေ အလုံအလောက်ရရှိဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။”
WHO တာဝန်ရှိသူက ပြုမူကျင့်ကြံပုံစည်းကမ်းအား ပြောင်းလဲရေးအတွက် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ အများအပြားက သာတူညီမျှ-လက်လှမ်းမီသော ချဉ်းကပ်မှုအစား အမြတ်အစွန်းသို့ ဦးတည်ချဉ်းကပ်မှုပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်နေတဲ့သူတိုင်းကို ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယန္တရားတစ်ခုထဲမှာ ထည့်သွင်းရေး စဉ်းစားဖို့ WHO က အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ အလွန်အားစိုက်ထုတ်နေပါတယ်။ ဒါက ကာကွယ်ဆေးအတွက် ပေးချေနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေမြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံတွေသာမကပဲ နိုင်ငံအားလုံး လက်လှမ်းမီဖို့ သေချာနိုင်အောင်လို့ပါ အခုကတော့ ကျွန်မတို့ ပြောနေတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့ မြင်နေရပါတယ်။”ဟု လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mariangela Simao က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြုမူကျင့်ကြံပုံစည်းကမ်းက နိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွက် ကာကွယ်ဆေးအတွက် မဟုတ်ကြောင်း ၊ ယင်းသည် လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်နိုင်ကာ ကပ်ရောဂါ ကြီးမားသော အဆင့်တွင် ကူညီနိုင်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
GENEVA, May 12 (Xinhua) — China’s Sinopharm COVID-19 vaccines, very much used globally, have been considered both safe and efficacious, according to Mariangela Simao, World Health Organization (WHO) assistant director general for access to health products.
“The code of behavior, when you talk about it, is not for vaccine nationalism. It is for everyone who hasaproduct that can beapublic health good and can help us in this acute phase of this pandemic,” she stressed. ■